Nyochaa vkworld S8, mmepụta oyiri nke Galaxy S8 nwere ihe ijuanya | Gam akporosis
Nyochaa vkworld S8
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Mobiles, Nyocha
Oge a ka anyị wetara gị ngwaọrụ sitere na ụlọ ọrụ ndị na-amachaghị ama nke China nke na-ezube inweta ohere na ahịa Europe. Vkworld na-ewetara ekwentị ọhụrụ ya, ndi vkworld S8. Ngwaọrụ ọhụrụ nke kesara aha Samsung kachasị elu nke ahịrị.
Nomenclature, S8, nke adighi adaba. Ọ bụghị naanị na ọ na-ekerịta aha nke ihe kachasị ọhụrụ ya na Samsung. Ọ bụrụ na anyị na-a anya na azụ nke ngwaọrụ anyị na-ahụ na ọnọdụ nke ya ọcha bụ kpọmkwem otu. Ya mere, ha na-ekerịta ọtụtụ ihe yiri nke ahụ.
1 The vkworld S8, ọ bụghị naanị mmepụta oyiri ọzọ nke Samsung S8
2 Ihe dị na igbe vkworld S8
3 Nhazi nke vkworld S8
3.1 Titanium na obi iko, ihe di nma maka vkworls S8
3.2 Ọnọdụ ọjọọ nke igwefoto dị n'ihu
4 Nnukwu ihuenyo 5,99-anụ ọhịa
5 Anyị na-ele anya n'ime vkworld S8
6 Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Vkworld S8
7 Igwefoto nke vkworld S8
8 Igwe batrị ka ụda ahụ ghara ịkwụsị
9 Wkworld S8 dara ezigbo mma
10 Nchebe na ebe na-adịghị ike
10.1 Onye na-achọpụta ihu: chọrọ mmelite
11 Ihe kacha mma na nke kacha mma na vkworld S8
11.1 Anyị na-amasị
The vkworld S8, ọ bụghị naanị mmepụta oyiri ọzọ nke Samsung S8
Usoro nke iji otu aha na ụdị ihe atụ nke klas ụwa na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ. Ọ nwere ike ịdọta uche nke ndị na - enweghị ike ịchọ ụdị "mbụ" n'ihi ọnụahịa. Ha ga-ahụ ihe dị mma iji nwee ike inweta nke dị ka ya. Mana ọtụtụ oge, ịkpọ ngwaọrụ ihe kachasị mkpa nke mbinye aka dị ike nwere ike ịla azụ. Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị n’ihi na ọ na-eme ka mmadụ jiri onwe ya na-atụnyere ibe ya.
Eziokwu bụ na anụ ahụ na vkworld S8 yiri Samsung S8 n'ọtụtụ ihe. Ọ bụ ezie na anyị agaghị abanye na ntụnyere dị n'etiti ha. Ọzọ anyị ga-akwatu isi site na isi ihe vkworld na-enye anyị na ngwaọrụ a.
Dị ka akụkụ kachasị dị egwu, na wkworld S8 nha nke nnukwu ihuenyo ya dị egwu. Otu panel nke metụrụ sentimita isii aka nke ọma, nke ahụ na-enyekwa nnukwu ihuenyo 5,99 sentimita asatọ Full HD na Corning Gorilla Glass nchedo nke LG bịanyere aka na ya. Ihuenyo nke agbakwunyere, dị ka akụkụ a ga-egosipụta, onye na-emesapụ aka 5.500 mAh batrị banyere nke anyị ga-ekwu maka ya na-esote
Ihe dị na igbe vkworld S8
Anyị na-emeghe igbe nke ama a, na dị ka ọ dị na mbụ, na ihu ihu anyị na-ahụ ngwaọrụ ahụ n'onwe ya. Site na ịnwụde ya n’oge anyị na-ahụ nnukwu ibu. A na-ekwenye ibu ibu karịa mgbe anyị nwere ike iji ya tụnyere ekwentị ọzọ dị nso. A 5.500 mAh batrị bụ ọrụ, ọ bụ ezie na ikekwe obodo kwụụrụ ya ụgwọ na-akwụ ụgwọ site na oke ibu.
Anyị na-ahụ ngwa na-adịghị ahụkebe, ọ bụkwa n'ihi ihe ọhụrụ nke ekwentị a nwere. Vkworld S8 na-ahọrọ USB Type-C, dị ugbu a ma were ya karịa ịrụ ọrụ karịa ugbu a micro USB. Ngwa abụghị onye ọzọ a "Mini Jack" ka USB Type-C nkwụnye nkwụnye dị mkpa iji jikọọ ekweisi anyị. Ee, na wkworld ha ekpebila ime na-enweghị isi okwu ekweisi na nti.
Anyị nwekwara USB cable maka njikọ data na ịchaji batrị. Na Mgbidi mgbidi iji jikọọ ya na ọkụ eletrik. Ọzọkwa anyị ga-ekwu maka ya enweghị n’ime igbe nke ama. Ndị na-emepụta ya echefuola ekweisi. Ọ ga-abụrịrị nkọwa iji tinye ụfọdụ ụdị USB a kapịrị ọnụ.
Agbanyeghi na anyi kwesiri inwe obi ekele ichota n'ime igbe a Silicone n'ọbọ nke ahụ ga - echebe ekwentị ọhụrụ anyị site na nkeji. Na a ihe nchebe ihuenyo. Mbinye aka ọzọ nke na-enye anyị otu oroma nzu (mkpụrụedemede silicone), na otu nke aja (enweghị ekweisi). Anyị enweghị olileanya. Na ọnụego a, na ekwentị webatara ekweisi nwere ike ịbụ uru ma ọ bụ uru karịa ndị na-asọmpi ya, ebe ahụ anyị ga-ahapụ ya.
Nhazi nke vkworld S8
Dị ka anyị kwuru, na vkworld S8 dị nnọọ reminiscent nke Samsung Samsung. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nuances na ọdịiche. Dịka ọmụmaatụ, ebe ihe gị dị na azụ bụ otu. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri anyị na-ahụ flash ọkụ abụọ, igwefoto yana akara aka mkpịsị aka. Ma na otu nnukwu ihe dị iche, wkworld S8 nwere igwefoto abụọ, ihe Samsung jiribeghị nye ngwaọrụ ya.
Anyị ekwuola okwu n'oge na n'azụ ọnọdụ nke mkpisiaka agụ, na ọkwa anatomical ọ dị mma karịa na ihu ya. Ma anyị na-arụtụ aka na nri n'akụkụ igwefoto abụghị nhọrọ kacha mma. Ọfụma igwefoto na-edobe "mkpịsị aka mkpịsị aka" nke nwere ike igirigi ma ọ bụ merụọ mpaghara oghere.
Ndakọrịta nke ihe ndị mejupụtara ya dị mma. Ihe ato ato a kwadobere na adighi nma ma onweghi nke ha. Mana nyere nhọrọ, anyị na-ahọrọ na onye na-agụ akara mkpisiaka dị ntakịrị ala karịa igwefoto. Ọ bụ ezie na a gharịrị ịghọta na ọfụma bụ ọganiihu.
Ma ihe eji arụ ụlọ, vkworld emeela ezigbo oru. Kedu ihe mbụ ịlele anya dị ka ihe plastik nwere ihe na-egbu maramara karịrị nke ahụ. Ọ bụ ihe gbasara a iko ejiri mesoo ya na usoro dị iche iche 40 nke e ji rụọ ọrụ dị iche iche ruo mgbe enwetara ihe achọrọ.
Titanium na obi iko, ihe di nma maka vkworls S8
Ya mere, anyị nwere na ya na azụ na a iko dị n'okpuru nke efere ọla dị n'ihi na ọbụna ihe inogide imecha. Vkworld na-eme ka o doo anya na azụ, ọbụlagodi na iko mechara, na-eguzogide ọgwụ na ọkọ karịa ọtụtụ smartphones. N'ezie ya imecha dị mma ma mara ezigbo mma.
The curved imecha na azụ akụkụ seamlessly inserts n'ime a unibody etiti mere nke titanium. Ojiji nke ihe a, tinyere ọgwụgwọ nke iko na azụ, na-ebute a jupụtara na nkume na nanị ngwaọrụ. Otu akụkụ dị mkpa na-atụle oge nke anyị ga-adakwasị n'ala. Nke ahụ na-enye nnukwu nkwado ma dị mma na mmewere nke aka anyị.
Anyị hụrụ ya n'ihu otu n'ime ihuenyo kachasị na ahịa na Smartphone nke nha a. Nha ya di ka nke ama nke nwere onyonyo ise. Nke a mezuru site na ekele a na-eme ka ọtụtụ oghere ihu na ihu ihu ihu ihu ihu nke 91%.
Ọnọdụ ọjọọ nke igwefoto dị n'ihu
Ọ bụ na ya n'ihu akụkụ ebe m na-ahụ ihe a na uche m nwere ike ịtụle a "snag". Ọ bụ ihe ebe igwefoto dị n'ihu. Dị ka iwu n'ozuzu, ọ dị n'elu akụkụ nke ihe mmetụta na nkwuputa ụda maka oku. N'okwu a wkworld dị ize ndụ na-etinye igwefoto na aka nri ala.
Na-eche na naanị 15% nke ndị bi n'ụwa nwere aka ekpe. Imirikiti anyị ndị ọrụ Smartphone na-eji aka nri jide ekwentị. Dị ka iwu zuru oke, iji aka nke aka anyị mgbe anyị na-eji mkpanaka ahụ, ma ọ bụ anyị nweta ngwa, ebe a na-ekpuchi igwefoto.
Ngosipụta okike mgbe anyị na-eme ka igwefoto selfie bụ ile anya n'elu ekwentị. Site n'ime nke a anyị na-ahụ onwe anyị na ihuenyo dị ka ilele ihu. Na ịbịaru ihu na ala site na ala anaghị abụkarị ihe na-adọrọ adọrọ. Ruo mgbe mmadụ ga-eme ka ọ mara ya, ọ na-esiri ike ịchọta ụzọ ị ga-esi see foto na-enweghị mkpịsị aka.
Ọbụlagodi iji mmeghe ihu na-emeghe, nke anyị ga-ekwu maka mgbe e mesịrị, ọnọdụ nke ile ala na ekwentị mkpanaaka abụghị ihe okike. Ka ọ were anyị na-ewere ya dị ka njehie ịwụnye igwefoto na ala nke ihu ihu nke ngwaọrụ.
N'ime ya Aka nri Naanị anyị na-ahụ bọtịnụ mkpọchi ma ọ bụ mepee ma ọ bụ gbanyụọ.
na aka ekpe anyị nwere njikwa olu na otu elongated button.
Anyị na-ekwupụta mgbe niile na mgbe ụlọ ọrụ na-enye ụfọdụ "nkọwa" dị ka okwu silicone, a na-enwe ekele maka ya. Ihe na-eso vkworld S8 dị ka ọ dị mma, ọ dịkwa mma na ngwaọrụ dịka ogwe aka. Ma anyị hụrụ ụfọdụ ihe isi ike mgbe ịpị bọtịnụ na silicone ikpe na. Kpọmkwem, bọtịnụ mkpọchi, nke nwere ihe mkpuchi na, ị ga-pịa ike ike karịa ka a tụrụ anya iji rụọ ọrụ ya.
Na okpuru nke ekwentị anyị na-ahụ igweokwu, nke Nchaji njikọ, na nke a nke USBdị USB-Cna nkwuputa ụda. Anyị na-achọpụta enweghị mkpa, na mini Jack njikọ. Wkworld S8 anaghị aga jack jack maka isi ihe dị mkpa. Ihe na-atụle nke ọtụtụ nzọụkwụ azụ kama ọganihu ..
a na-emezi eku ahụ na titanium
Nnukwu ihuenyo 5,99-anụ ọhịa
Ọ bụla smarpthone ọhụrụ anyị zutere anyị na-ahụ ejiri 5 echefu echefu. Ọbụna ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa na-eji nwayọ nwayọ. Ogo nke ihuenyo na-aga n'ihu na-abawanye na nke a bụ ihe akaebe doro anya nke a. Na wkworld S8 na-agba ịnyịnya a 5,99 inch ihuenyo zuru oke agbakwunyere na ahụ na-enweghị ibu karịa ekwentị ọ bụla nwere ihuenyo 5-inch.
Anyị nwere ihuenyo 18: 9 usoro HD zuru oke. Nke ahụ nwere Ọgbọ nke anọ Corning ozodimgba nchedo nchedo. Na a 2160 x 1080 mkpebi nke ahụ ga - eme ka anyị nwee ọmarịcha àgwà nke ihuenyo gosipụtara nke LG mere.
The vkworld S8 na-akwado nkwenye na anyị na-ejikwa ekwentị anyị eri ọtụtụ usoro ma ọ bụ ihe nkiri. N'ihi nke a, nnukwu mkpebi na nha ihu ọma dị elu na-abawanye uru n'etiti ndị ọrụ. Inwe ike iche maka ụfọdụ nhọrọ maka otu ma ọ bụ ọdụ ọzọ.
Ngosipụta vkworld S8 na-egosipụta a ilele nkuku ruo ogo 178. Na njupụta nke 403 pikselụ kwa inch. Ọ na-enye anyị data nke ndị nrụpụta ole ma ole họrọ ikpughe n'ihe gbasara ọkwa nchapụta na nchapụta. Na vkworld S8 ruru 550 nits nke nchapụta. Nke a pụtara na anyị agaghị enwe nsogbu ịgụ ma ọ bụ jiri ekwentị nwere nnukwu ọkụ n’èzí.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, ezigbo ihuenyo dị mma, mkpebi na nha. Data nke dị elu mgbe ọ na-abịa asọmpi n'egwuregwu Smartphone dị oke egwu. Ma olee nke ọ bụla ọnụnọ n'ihu ụlọ obibi ruo 91% dị ka ọtụtụ n'etiti ọha na eze.
Anyị na-ele anya n'ime vkworld S8
Oge eruola ịhụ ihe Smartphone a na-enye anyị n'ihe gbasara ike. Anyị ga-ekwukwa na ọ dị mma ịgbaba n'ime ụdị data ahụ na ngwaọrụ na priori abụghị elu nke nso. Anyị ahụwo na ọnwa ikpeazụ nke 2017 na 2 GB nke Ram maka ekwentị yiri ka ọ dị ụkọ. Dịkwa ka ọtụtụ ndị nrụpụta, ọ họrọ ịgbasa ebe nchekwa ahụ.
The vkworld S8 akpan akpan kpebiri iji oyiri ya. N'ihi ya anyị na-ahụ a Nchekwa nchekwa 4 GB. Na ya na a 64GB ROM maka nchekwa malite na ha na-eme ezigbo di na nwunye. Ọ bụghị nọmba a na-apụghị ịgụta ọnụ na Smartphone nke dị na ọnụahịa ọnụahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ihe njedebe dị elu ga-efu anyị.
Nke mere na ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke, vkworld S8 na-arụ ọrụ n'okpuru nhazi nwere ihe karịrị ntụkwasị obi egosiri. Na MediaTek 6750, onye nhazi ihe na ụlọ ọrụ ndị dịka Huawei, LG, Meizu ma ọ bụ Doogee na-aga n'ihu ịtụkwasị obi, n'etiti ndị ọzọ. Na na ana achi achi na niile akụrụngwa nke ekwentị na-enye kacha arụmọrụ enweghị oké oriri ike. Otu Octa-isi nke ka dị ugbu a na ọtụtụ ekwentị na-ekele ya maka nsonaazụ ọma ya.
Banyere sistemụ arụmọrụ, n'ezie, anyị nwere kacha ọhụrụ na android. Obi dị anyị ụtọ ịhụ na ọ naghị abịa usoro nhazi ọ bụla. Ya mere, anyị nwere ike ịnweta ntọala niile na njikwa nke gam akporo na-enye anyị. Ihe ịga nke ọma na-enweghị mgbagha, Android "dị ọcha" bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ izere arụmọrụ n'etiti nkwụsị ma ọ bụ ikpo oke ọkụ na-enweghị isi.
Ya mere, anyị nọ n'ihu a Smartphone na-arụ ọrụ ebube na ọrụ ọ bụla. Anyị anwalela egwuregwu na eserese na-achọ ihe. Movies na usoro playback ngwa. Na GPS nchọgharị. Ihe si na ya pụta dị mma na ule niile. Ime ọtụtụ ihe abụghị nsogbu. Ngwaọrụ na na-arụ ọrụ nke ọma na nyocha niile emere, ọ na-emekwa n’etinyeghị mmụba ọ bụla na ọnọdụ okpomọkụ.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, njedebe dị elu ga-etinye batrị ngwa ngwa. Ngwaọrụ ọhụrụ ọ bụla anyị na-ezute, anyị na-ahụ etu etu etiti etiti echebara dị n’ikiri ụkwụ ya n’otu n’otu. Ọ nwere ike ịbụ na inweta ama atụlere dị ka "elu" ga-abụ obere ma baa uru karịa oge. Ruo oge ụfọdụ, ọdịiche anyị nwere ike ịchọta n'etiti otu na nke ọzọ pere mpe.
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Vkworld S8
Usoro njikwa gam akporo 7.0
Ihuenyo 5.99 Corning ozodimgba iko LG - 18: 9 Full HD usoro
Nhazi MediaTek 6750T 1.5 GHz Octa - Isi
Nchekwa 64 GB gbasaa
Rear igwefoto Igwefoto abụọ 16 Mpx + 5 Mpx
Batrị 5.500 mAh - na-akwado ụgwọ ngwa ngwa
Size 75.00 mm x 158.00 mm x 8.5 mm
Ibu ibu 247 g
Ahịa 143.99 €
Herezụta ebe a vkworld S8 na ego kacha mma
Igwefoto nke vkworld S8
Dị ka ọ dị na ndị nrụpụta ọrụ, ndị na-emepụta ama ama ama ama ama na-anwa ịwazie igwefoto ha. N'ịmara na n'etiti ndị hụrụ netwọkụ mmekọrịta n'anya, inwe igwefoto ruru eru nwere ike ịbụ ihe niile. Anyị na-ahụ otú Ugwu jọgburu onwe ya nke igwefoto ekwentị China nwere afọ ole na ole gara aga na-agbada na akụkọ ntolite.
El vkworld S8 nwere tozuru abụọ igwefoto azụ. Onyinye na anya m abụọ na mkpebi nke 16 Mpx na 5 Mpx na jikọtara na-ike nke na-enye ezigbo nsonaazụ. Anyị nwere ike ịnweta foto nke nwere nkọwa zuru oke, nwee ike igosipụta agba na steeti ha dị ọcha. Ọkwa dị mma ga-enwetakwa na nguzo ọcha.
N’ihe onyonyo ejiri ezigbo ọkụ eke, anyị na-ahụ etu elekwasị anya si dị mma n’ezie. Na iche na iche iche nke otu agba abụghị nsogbu iji nyefee onyogho dị nkọ.
Ekelere igwefoto abuo anyị nwere ike ịse foto na ama ama Eserese mmetụta. Na-akọwapụta isiokwu ahụ na ihu ụzọ na nwayọ na-agbada nzụlite maka ọrụ nka na anya. Na Anyị nwekwara ike ịhọrọ site n'ụdị dịgasị iche iche nke ụdị ọnọdụ nke ntọala igwefoto akpaka. Odida obodo, ọzọ, osimiri, sinima, snow na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime ya n'ihu akụkụ anyị hụrụ otu Igwefoto foto nke nwere mkpebi nke 13 Mpx. Anyị selfies ga-eru otu larịị nke àgwà dị ka foto na-ewere na isi igwefoto. Mana anyị enweghị ike izere ịmegharị nke ahụ ọnọdụ ya bụ ajọ omume nnukwu. O bu ihe ekwesighi ka anyi wepu aka n’ebe anyi jidere ekwenti iji see foto n’enweghi mkpisi aka ma obu aka n’aka.
Mgbe ị na-ese foto na igwefoto n'ihu anyị nwere ike ịhọrọ ihu mma ihu. No gakwaghị enwe ihe ngọpụ maka ịmeghị ọfụma. N'aka anyị a dum katalọgụ nke mmetụta ka mma (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume) foto nke onwe. Mma, polishing, ndinyanade mbịne, acha ọcha ma ọ bụ nnukwu anya. Nye Chọrọ Dọkịta Na-awa Ahụ?
Na foto iji mbugharị na nke kachasị anyị na-ahụ otú eserese ikpeazụ adighi pixelated. Anyị na-achọpụta ihe dị iche iche nke njide ahụ. Site na ezigbo ọkụ dị mma pụta, n'ihe gbasara mbugharị ngwa anya, a nabatara.
Igwe batrị ka ụda ahụ ghara ịkwụsị
Mgbe anyị hụrụ Smartphone nwere nnukwu ihuenyo, obodo kwụụrụ ya nke batrị ya dị mkpa. Ike oriri kpatara site na iji ogologo oge na ihuenyo nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6 sentimita asatọ n'ogo dị oke elu. Ya mere siri ike ịkwado maka ụbọchị zuru ezu site na batrị igwe. The vkworld S8 ewerewo nkọwa a n'ime akaụntụ.
Anyị nwere batrị 5.500 mAh. Ego zuru ezu ka ị ghara ichegbu onwe gị maka chaja maka ụbọchị zuru ezu. N'ezie, Na-adabere mgbe niile n'otú anyị si eji ekwentị, anyị nwere ike ịnọ ụbọchị abụọ zuru oke na-enweghị ịkwụnye ya ibu. Ihe ọgwụgwọ maka ndị na-ejegharị ụbọchị niile yana eriri na-aga n'ihu.
Site n'iji ngwaọrụ ahụ ogologo oge maka ụbọchị zuru ezu enwere m ike iji ya na-akwụghị ụgwọ ruo oge mgbede n'echi ya. Ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na ngwaọrụ ndị ọzọ ọbụlagodi obere ihuenyo. Ezubere batrị wkworld S8 iji nagide ojiji ogologo oge na ya mere na anyị nwere ike kpamkpam echefu ụbọchị banyere inwe ụgwọ ya.
Dị ka akụkụ na-adịghị mma, inwe nnukwu batrị bụ nke ruru nha, ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, iji na ekwentị nwere ibu dị elu. Nakwa ihe anụ ahụ ọnụ nweta ole na ole centimeters na ọkpụrụkpụ E nwere echiche abụọ dịgasị iche n'okwu a. N'otu aka, enwere ndị na-ahọrọ oge na nnwere onwe, na-ewere ibu dị ukwuu nke ngwaọrụ ahụ dị ka obere njọ.
Mana n'aka nke ọzọ enwere ndị na-atụle oke ibu na ekwentị nnukwu ọdịda. Obere ekwentị bu ihe kpatara ya. Na ịgbanye n'ime ekwentị nwere okpukpu abụọ ọ na-adịbu anaghị adị mfe. Ka ọ were enwere ndị na-ahọrọ ka ịna-akwụ ụgwọ ekwentị kwa ụbọchị na nkwụghachi maka arọ dị mfe.
Dịka iwu zuru oke, ndị ọrụ niile kwenyere na ha chọrọ karịa RAM na ROM. Igwe kacha elu na mkpebi igwefoto. Ọbụna nnwere onwe ka ukwuu. Mana o siri ike itinye ndị ọrụ niile na nkwekọrịta na nke a. Ha na-enwe ibu megide nnwere onwe. The vkworld S8 ga-egbo n'ezie ndị na-achọ ihe batrị karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Wkworld S8 dara ezigbo mma
Ngalaba ụda na-adịwanye obere na nyocha ekwentị mkpanaaka. Ma eleghị anya, ọ bụ n’ihi na ọ bụ ihe anyị na-achọghị ịma. Nke ahụ bụ, ọ bụ otu n'ime akụkụ nke anyị na-adịghị a leasta ntị. Ọ bụrụ na ihe ndị magburu onwe ekwentị nwere ubé ogbenye ọkà okwu ụda na-abụghị ihe na-echegbu onwe.
Anyị na-eji ngwa ndị dị na mpụga eme ihe iji gee egwu ma ọ bụ lelee vidiyo. O di nwute, o bu ihe anahu anya ichota otu onye okwu n’onu ihe omuma nile na ahia. Dị ka anyị hụrụ ruo ogologo oge, ụda bụ akụkụ nke obere ma ọ bụ ihe ọ bụla gbanwere.
The vkworld S8 na usoro nke ụda ọ na-enye bụ otu ekwentị. N'ezie, ọ na-esiri ike iji Smartphone tụnyere data ndị ọzọ na data. Nke a bụ n'ihi na anyị enweghị data. Ndị na-emepụta ihe na-ahapụkarị watts nke ike site na ndị na-ekwu okwu ha. Na ọkwa nhazi na usoro nke ụda ụda na-abụkarị efu.
N'okwu a, mgbe anyị nyochachara ya n'ọnọdụ dị iche iche, anyị nwere ike ikwenye nke ahụ na olu larịị na kacha ụda na-anọgide doro anya. Ọ naghị agbagọ ọbụlagodi mgbe ị na-eji ụrọ akpọrọ akpọrọ egwu. Ọ na-arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke, ọ na-ada ụda nke ọma. Na-agaghị ekwe omume mgbe niile, mana na-ezute atụmanya.
Ugbu a, a na-eji ndị ọkà okwu eji arụ ọrụ nke ukwuu, na ọbụlagodi na ha pere mpe, ha nwere ike inye nnukwu ike na ogo dị mma. Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na echiche siri ike ịnye Smartphone nke ga-abụkwa ihe ọkpụkpọ? Ekwentị nwere ike ibugharị ụda ụda ga-ada ụda nke ọma na mpụga. Nke ahụ n'onwe ya nwere ike bụrụ ihe ọhụụ na ahịa. Welcome nabatara ndị nrụpụta.
Ekwesiri ighota na ngalaba ụda enweghi nke mythical mini Jack port. Ọdụ ụgbọ mmiri nke jikọrọ ekweisi anyị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ site na mmalite nke ekwentị mkpanaaka. Mgbe Apple, ya na iPhone 7 ya, kpebiri iwepụ ya, ọ bụ oge tupu ndị ọzọ esoro. The vkworld S8 enweghị ntinye a, m ga-ekwukwa na n'oge ụfọdụ a na-atụfu ya.
Ya mere, anyị enweghị ike ịtụle evolushọn iji kpochapụ ọdụ ụgbọ mmiri nke bara uru taa. Ndị na-emepụta ihe na-agụnye ihe nkwụnye n'ime igbe ka anyị nwee ike ijikọ isi ọ bụla na njikọ USB ụdị C. Ma enwere ihe anyi n’enweghi ike ime ozo: eGee egwu mgbe anyị na-akwụ ụgwọ ekwentị. Na na nwute bụ ihe a na-eme ugboro ugboro.
Nchebe na ebe na-adịghị ike
N'oge a anyị hụrụ otu n'ime akụkụ nke ndị nrụpụta etinyekwuola akụ. Anyị amataworị ndị na-agụ akara mkpisi aka. Na otu otu ụlọ ọrụ sirila mee ha nke ha site na ịgbanwe ọdịdị ha ma ọ bụ ọnọdụ ha. Fọrọ nke nta niile ekwentị ụdị ugbua nwere akara mkpisiaka aka.
Tupu ndị na-agụ akara mkpisiaka a apụta, anyị ga-edozi maka ihe dị. Fọrọ kemgbe mmalite nke gam akporo Sistem, anyị ntị nwere ohere nke guzosie ike ihe lokpọghe ụkpụrụ. Ma ọ bụ koodu ọnụọgụ nke, yana ụkpụrụ ahụ, ka ejiri iji nweta isi menu nke Smartphone.
N'afọ gara aga Anyị ahụla etu ụlọ ọrụ kachasị ike sirila tinye ọnụ gaa na ngwaọrụ gị kachasị “elu” sistemụ nchekwa ọhụrụ. Teknụzụ dịtụ ọhụrụ nke na-enye anyị ohere ịmeghe ekwentị anyị naanị na ihu anyị. Na ihe ijuanya, ọzọkwa, ọtụtụ amalitela i haveomi teknụzụ a.
Onye na-achọpụta ihu: chọrọ mmelite
Mgbe anyị gbanyere ekwentị ọhụrụ maka oge mbụ, anyị ejirila ajụjụ na ndozi maka nhazi mbụ ya. Ma anyị nwere obi ụtọ kachasị, ozugbo akara mkpisiaka anyị ziri ezi. The vkworld S8 na-arịọ ihu ude kpọghee ngwaọrụ.
Anyị ga-ekwu nke ahụ na ụkpụrụ ahụ mmetụta dị ezigbo mma. Na-eweta ihu gị nso na ngwaọrụ ahụ unlocks dịtụ ngwa ngwa. Na-agabiga ahụ erughị ala nke ọnọdụ igwefoto n'ihu, na ilele ya anya, ekwentị na-emeghe. Ọganihu na ihe na mgbe anyị jiri ya na nke mbụ dị ka ọtụtụ.
Mana mgbe anwalechara, anyị na-agbasi mbọ ike iji teknụzụ a. ọdịdị ihu iji kpọghee ekwentị a. Dị ka anyị kwuru na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Ihe bụ nsogbu bụ na ọ bụghị naanị na a kpọgheela ya na mmalite kanyere akụkụ. N’ule ndi mmadu 10, ato n’ime ha jiri ihu ha kpoghee ekwenti. Ọ dịghịkwa ndị nwere ike imeghe ya yiri ibe ha.
Nke mbụ, anyị chere na foto ahụ nke ngwaọrụ ahụ maka mmata ihu enweghị nke ọma n'ọnọdụ ọkụ dị mma. Ma mgbe ịmeghachi foto ahụ n'ọnọdụ kachasị mma, ihu ihu ka dị Ezighi ezi. Otu akụkụ nke Enwere ọtụtụ ihe iji mezie. Nke na-achọ ịmata ihe nwere ike ịmasị, mana n'oge ahụ ọ bụ ihe ọ gaghị ekwe omume.
Ihe kacha mma na nke kacha mma na vkworld S8
Ihe mbu na ihe di egwu bu nha ihuenyo gị. Measurefọdụ nha na-agwụ agwụ site na a ezigbo mkpebi. Ihuenyo ya na-eme wkworld S8 ezigbo Smartphone maka ịkpọ ọdịnaya ọdịnaya.
Nnwere onwe nke a 5500 mAh batrị ọ dị na ihe ihuenyo 5,99-inch nwere ike iri. Iji ekwentị mee ihe na nkezi, batrị ahụ nwere ike ịnye anyị ụbọchị abụọ zuru oke.
Na ngalaba maka ihe iji meziwanye anyị etinyela ọtụtụ akụkụ. Nke a apụtaghị na vkworld S8 abụghị Smartphone nke bara uru. Kama nke ahụ, ọ bụ ekwentị a tụrụ aro nke ukwuu, ọbụnadị ịmara ọnụahịa dị n'etiti ya na-emegharị.
Anyị chọrọ ịkọwa dịka otu n'ime akụkụ bụ isi iji melite n'ihu igwefoto ọnọdụ. Anyị enweela ike ịhụ na onye mbụ etu, ọ dịkarịa ala ịbụ aka nri, ọ na-esiri ike ịse foto n'emeghị mkpịsị aka ma ọ bụ akụkụ aka. Ihere na-eche na anyị na-eche ihu ihe mmetụta dị mma nke igwe ojii na-achagharị site na itinyeghị ya n'ọnọdụ ka mma.
Ibu ibu M ka na-eche na m bụ ihe mgbochi nye ọtụtụ ndị. Akụkụ dị ukwuu nke ndị na-azụ ahịa ga-adị njikere ịhapụ ọtụtụ awa nnwere onwe maka ibu dị arọ.
Anyị na-emeghachi onwe anyị ọzọ na enwere ike ịmezi ọnọdụ nke onye na-agụ mkpịsị aka. Inwe ya nso na oghere igwefoto na-eme ka mkpịsị aka anyị mechie ya ọtụtụ oge.
nha ihuenyo na mkpebi
n'ihu igwefoto ọnọdụ
ezighi ezi ihu ihu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nyochaa vkworld S8
Ekwentị dị mma nke ga-aba uru maka onye ọrụ ọ bụla, mana ihuenyo ahụ dị ukwuu ma nwee anyaukwu, bluetooth bụ ọdachi, ọ na-apụ n'etiti mkparịta ụka ma ị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ejikọtara, ọ na-agbanyụ.
Chaja nke ya dị ezigbo mma, mana ọ bụrụ na ị gbanwee chaja ahụ, eriri USB na-agba egwu ma na-apụta ma na-akwụ ụgwọ dị nwayọ nwayọ.
Edebewo m ya dịka ekwentị mkpanaka
Zaghachi Antonio López
Kodi 18 ga - adaba na Google Assistant
Companylọ ọrụ ndị mepụtara faịlụ Turing Phone maka enweghị ego